ပင်မစာမျက်နှာ Affiliate Partner အစီအစဉ်
Affiliate ပရိုဂရမ်သည်ငါတို့ဆုရသည့် data recovery data software များနှင့်သင် ၀ င်ငွေရရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှမဂ္ဂဇင်းများ၊
DataNumen တွဲဖက်အစီအစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်?
သင်ထုတ်လုပ်သောရောင်းချမှုတစ်ခုစီအတွက်သင်စုစုပေါင်းရောင်းချမှုပမာဏ၏ ၂၀% ထက်မနည်းပါ။ ကော်မရှင်သည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်၍ တိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများပြန်လည်ထုတ်ယူသောထုတ်ကုန်များ၏ရောင်းအားပမာဏများလေလေ၊ သင်၏ရာခိုင်နှုန်းပိုများလေလေဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အတူပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်အထူးစျေးနှုန်းများ၊ အထူးလျှော့စျေးများ၊ အားလပ်ရက်အရောင်းအ ၀ ယ်၊ တိုက်ရိုက်မေးလ်နှင့်အခြားများစွာရှိပါသည်။ မည်သည့်ကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုမဆိုသင်အမြဲတမ်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။ သတင်းကိုစီစဉ်သောအခါကော်မရှင်ရာခိုင်နှုန်းတိုးနှုန်းအပေါ်သင်အားကိုးနိုင်သည် posting, ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ရပ်များ။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ မင်းမှာအကြံဥာဏ်ရှိလား။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
မည်သည့်မေးခွန်းများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုမဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပြီးသင့်အားအချိန်တိုအတွင်းအရည်အသွေးမြင့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်ပုံစံကို သုံး၍ မည်သည့်မေးခွန်းများမေးရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်တောင်းဆိုချက်ပြုလုပ်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Affiliate Program နှင့်သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား Affiliate ID တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးပါမည်။
ဒီ Affiliate ID နှင့်အတူ, ငါတို့ထုတ်ကုန်မဆိုတ ဦး တည်းအဘို့အထူးခြားသောအမိန့် link ကို generate နိုင်ပါတယ်။ သင်၏ဖောက်သည်သည်ဤထူးခြားသောအမှာစာလိပ်စာကိုဝယ်ယူပါကသင်၏ရည်ညွှန်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီးကော်မရှင်ကိုသင့်အားသတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဤတွဲဖက်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိမည်သည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုမဆိုထူးခြားသောလင့်ခ်တစ်ခုထုတ်နိုင်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်သည်ဤထူးခြားသော link မှတစ်ဆင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့သွားပါကသင်၏တွဲဖက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် cookie တစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနောင်တွင်ဝယ်ယူပါက cookie ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကော်မရှင်ကိုသင့်အားတာဝန်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ cookie သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာကိုပထမဆုံးလာရောက်ပြီး ၆ လအတွင်းဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချသရွေ့သင်ဝယ်ယူမှုမှကော်မရှင်ရရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်အစီအစဉ်ကိုစီမံသည် MyCommerce.com နှင့် FastSpring.com, နှစ် ဦး စလုံး software ကို Affiliate အစီအစဉ်များအတွက်ထူထောင်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတိုင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ Affiliate အစီအစဉ်ကိုအလွန်လွယ်ကူသည်။ လျှို့ဝှက်က c မရှိပါostဟုတ်တယ် အခမဲ့ စာရင်းသွင်းရန်
MyCommerce.com Affiliate Program ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
FastSpring.com Affiliate Program ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်နောက်၊ သင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာ ID နှင့်ညွှန်ကြားချက်များပါသည့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးပါမည်tarသင်ငွေရှာနိုင်အောင် t ချက်ချင်း!
သင့်တွင် MyCommerce.com သို့မဟုတ် FastSpring.com တွင်တွဲဖက်အကောင့်တစ်ခုရှိထားပြီးဖြစ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင့် control panel ထဲဝင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ရှာပါ။tart ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းချသူ ID မှာ 39118 MyCommerce.com နှင့် datanumen FastSpring.com ပေါ်မှာ။